कपिल मगरले सविता राइको प्यासी जोवन चाख्न खोजेपछि « OsNepal News
कपिल मगरले सविता राइको प्यासी जोवन चाख्न खोजेपछि
आफैमा मोडल,आफैमा गायक कपिल मगरको नयाँ भिडियो सार्वजानिक भएको छ । पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुने गरेका गायक कपिल मगरले केही अन्तरालपछि नयाँ गित प्यासि जोवानको भिडियो सार्वजानिक गरेका हुन । यसअघि उनले नै गाएको सेकसी जवानी बोलको गितले बजार पिटेको थियो । प्राय ग्लमर शब्द समेट्न रुचाउने गायक कपिलले यसपटक पनि भिडियोलाई त्यसैगरि प्रस्तुत गरेका छन ।
गज्जबको कुरा त के छ भने यो गितको शब्द संगित गायन देखी भिडियो निर्देशन समेत कपिल आफैले गरेका हुन । कपिलसंगै गितमा विष्णु आलेले स्वर दिएकी छिन । भिडियोमा माडलिङ्ग समेत आफै गरेका कपिलले सविता राईसंग रोमान्स गरेका छन । हेर्नुहोस यो भिडियो:::
र यो अगाडीको हिट गित पनि हेर्नुहोस
काठमाडौँ । अध्ययनसँगै नृत्य प्रक्षिशकको भूमिका निभाईरहेकी दुधपाटी भक्तपुरकी १८ वर्षीया ईना सा‌ंगाछेँ सानैदेखी नृत्यमा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानको चिठी भाइरल बनेको छ । अमृता सिंह र
दीपिकाको बिवाहमा नगएका नरेन्द्र मोदी प्रियंकाको बिवाहमा गएको भन्दै जो बने आक्रोशित, के हो खास कुरा ? मोदीलाई गाली गरेको भिडियो बन्यो भाइरल
एजेन्सी – अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको बिवाहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितीले यतिबेला हंगामा नै मच्चाएको
मोदी प्रियंकाको बिहेको पार्टीमा गएर हाँसेको भिडियो बन्यो भाइरल, आखिर किन हाँसेका थिए दिल खोलेर मोदी ? हेर्नुहोस् भिडियो
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियांका चोपडा र निक जोनसले भारतको जोधपुरमा क्रिश्चियन र हिन्दु परम्परा अनुसार
अस्ट्रेलियामा एक्सपर्ट एजुकेसन कप २०१९ को तयारी